'Dhimma Siyaasaa Ijoo Finfinneetti Mari'anna' - Leencoo Baatii });
'Dhimma Siyaasaa Ijoo Finfinneetti Mari'anna' - Leencoo Baatii
Adda Diimokraatawaa Oromoo (ADO) jila aanga'oota Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa waliin Caamsaa 11-12, 2018tti taasiseen booda gara biyyaa galuuf akka jiru beeksiseera.
Jijjiiramoota biyya keessatti ta'aa jiranirratti marii firii-qabeessa mootummaa Itoophiyaa waliin taasisuu kan himu dhaabichi, wanti ammallee guutamuu qaban hedduu ta'us tarkaanfiilee qajeelaa mootummaan dhiheenya kana fudhate gammachuun akka simatu himeera.
maree mootummaa Itoophiyaa waliin taasisaniifi waan fuula duratti ta'uu malu BBC/tti himaniiru.
ADO'n erga hundeeffamee kaasee qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf murteessee kan jedhan miseensa koree hojii raawwachiiftuufi dubbi-himaan ADO Obbo Leencoo Baatii, "biyyattiif nagaa, dimokiraasiifi guddina fiduudhaaf ammoo biyya gallee uummata keessa teenyee qabsaa'uun murteessaadha," jenneera jedhan.
Yeroo gara garaatti biyyatti deebi'anii hojjechuuf yaalaa turuus ni dubbatu.
"Siyaasni bakka tokko hin taa'u, ni jijjiirama. Akkuma beekamus gaaffiin dimokiraasiifi jijjiiramaa bal'inaan biyya keessatti gaggeeffamaa jira. Kanaaf, mootummaanis yeroo jalqabaatiif gaaffii keenyaaf deebii kennee fuulaafi fuulatti waliin teenyee adeemsa duraa jalqabneerra," jedhu.
Marii arma duraa.
Marii marsaa duraa aanga'oota mootummaa Itoophiyaa waliin taasisaniin imala dimokiraasii Itoophiyaa keessatti dhimmoota jijjiiramaniifi kan hin jijiiramne, akkasumas gara fuula duraatti wantoota jijjiiramuu qaban irratti mari'atuu dubbatu.
Dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan kan akka, dirree dimokiraasii bal'isuu, tokkummaa fi nagaa uummataa fiduun danda'amurratti waliin mariyatanii kan itti aanu ammoo akka Finfinneetti ta'u walii galuu isaanii dabalanii himaniiru.
"Kanaaf, jilli keenya yeroo dhiyootti gara Finfinnee deema," jedhaniiru.
Yeroo mootummaa waliin mariyattan akka haal-dureetti kan keessan maal ture gaaffii jedhuuf, mareen duraa kun haala biyya jiru gaafachuun wal hubachuu akka ta'e ibsu.
"Waanti tokkoyuu hin turre, dhimma siyaasaa ijoo Finfinneetti mari'anna," jedhan.
Hidhata Ginboot 7.
ADO'n dhaaba mormituu biyyaa alaa taa'ee qabsoo hidhannoo gaggeessu Ginbot 7 waliin walii galtee qaba.
Itoophiyaa keessatti jijjiiramniifi haaromsi bal'insa qabu akka barbaachisu ni amanna kan jedhan Obbo Leencoon, Itoophiiyaa keessatti dimokiraasiin akka jiraatu gochuuf dhaabbileen siyaasaa fi namoonni dhuunfaan isaan galchu hedduu waliin akka hojjetan dubbatu.
"Nuti akkuma beekamu dhaabbilee hedduufi biyyoota warra dhihaafi Afriikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjenna. Galmi keenya, Itoophiyaa keessatti dirreen dimokiraasii akka baballatu, araarrifi tokkummaan akka jiraatu, hunduu akka walii galuufi aangoo qabachuun karaa filannoo qofaan akka ta'u barbaanna," jedhu.
Gara fuula duraatti mootummaan dirree siyaasaa bal'isuun warri qabsoo karaa nagaa keessa hin jirre gara kanatti seenanii akka hirmaataniif waanta dandeenyu ni goonas jedhan Obbo Leencoon.
Kanaaf Ginbot 7s ta'e kanneen biroo waliin biyya tokko waan qabnuuf waliin ni hojjenna jedhan.
Imala gara Finfinnee.
Akkuma biyya alaatti qaama mootummaa Itoophiyaa waliin mari'anneen jila keenya olaanoo waliin gara shaggar deemnee qabsoo keenya itti fufna jedhu.
"Uummata keenyaaf waggoota shantamaa oliif qabsoo gaggessaa waan turreef ammas gammachuudhaan uummata qabsaa'aafi turre waliin wal arguuf abdii guddaa qabna," jedhu.
Paartiileen Oromoo biroon biyya alaa keessa qabsoorra turanille karaa wal fakkaataan osoo gara biyyaatti deebi'anii qabsoo gaggeesanii gaariidha jechuunis dubbataniiru.